Ahmed Madoobe oo Ciidamo Gaar ah ka soo daabulay Kismaanyo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ahmed Madoobe oo Ciidamo Gaar ah ka soo daabulay Kismaanyo
Waxaa goordhaw diyaarad gaar ah magaalada Kismaayo kasoo qaaday ciidamo si gaar ah oo u tababaran oo katirsan ilaalada Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kuwaa oo si gaar ah u ilaalinaya inta uu joogo magaalada Dhuusomareeb uu maanta tagayo.
Ciidamadan ayaana magaalada Dhuusomareeb uga sii hormaraya Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo la filayo saacadaha soo socda in uu gaaro magaalada Dhuusomareen ee caasimada Galmudug.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa la sheegay in aysan kalsooni badan ku qabin ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa dowlada , waxa ayna magaalada Dhuusomareeb la tagayaan ciidamo si gaar ah amaankooda u ilaaliya.
Magaalada Dhuusomareeb oo maanta la filayo in uu ka furmo shir ay yeelanayaan Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa si weyn loo adkeeyay amaanka magaaladaasi ay wada joogaan ciidamo kala duwan oo ka amar qaata dowlada iyo maamulada qaar.
Previous articleDoor intee la Eg ayuu Ra iisal wasaare Kheyre ku lee yahay Shirka Dhuusamareeb
Next articleHoyoXaliimo Waxaan dhibaato ku qabay helista Pasaporka waxaa goobta soo gaaray Maxamed aadan Koofi, aqoon uma lahayn, waa la ii sheegay waan ku booday sida wiil aan dhalay oo kale,
Deegaanka Daarusalaam oo si weyn loogu Dabaal Dagay Munaasabadda Ciida.
Beesha Xawaadle oo Digniin tii ugu cusleed hawada u marisay Madaxweyne...